FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBasque IsiBhulu IsiBislama IsiCatalan IsiChichewa IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGalician IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabyle IsiKannada IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaya IsiMingrelian IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiOtomi (SaseMezquital Valley) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTahiti IsiTajiki IsiTankarana IsiTarascan IsiTelugu IsiTigrinya IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTongan IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUzbek IsiValencian IsiVezo IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu isiZapotec (saseIsthmus)
EMexico nakuMbindi Merika kukho abaguquleli abamalunga nabayi-290 abahlala kumazwe amathandathu nabaguqulela uncwadi lweBhayibhile ngeelwimi ezingaphezu kweziyi-60. Kutheni besenza lo mgudu? Ngoba xa abantu befumana uncwadi lweBhayibhile ngeelwimi zabo, banokuluqonda lula yaye lungafikelela iintliziyo zabo.—1 Korinte 14:9.
Ukuze kunyuswe umgangatho, abanye abaguquleli ababesebenzela kwiofisi yesebe yamaNgqina kaYehova kwiSixeko saseMexico baye bafuduselwa kwiindawo apho ulwimi lwabo luthethwa khona. Incede njani loo nto? Abaguquleli batsho bakwazi ukuguqulela ngendlela evakalayo necacileyo kuba behlala kunye nabantu abatheth’ olo lwimi.
Bathini abaguquleli ngolu tshintsho? UFederico oguqulela ulwimi lwesiGuerrero Nahuatl uthi: “Kwiminyaka ephantse ibe lishumi endayichitha kwiSixeko saseMexico, ndafumana intsapho yanye kuphela ethetha ulwimi lwam. Kodwa kwezi dolophu zikufutshane neofisi yokuguqulela, phantse wonk’ umntu uthetha ulwimi lwam!”
UKarin oguqulela isiLow German kwiofisi ekwiphondo laseChihuahua eMexico, uthi: “Ukuhlala apha kundincede ndakwazi ukuva ukuba bathetha njani abantu. Idolophu esihlala nesisebenzela kuyo incinane, xa ndiphos’ amehlo efestileni nditsho ndibone abantu abaza kuncedakala ngumsebenzi wethu wokuguqulela.”
UNeyfi ohlala kwiofisi yokuguqulela eseMérida, eMexico uthi: “Xa siqhuba izifundo zeBhayibhile ngesiMaya, sitsho sikwazi ukuva iindawo ezinzima nezingaqondwayo ngamaMaya. Ngoko siye sikhangele indlela abantu abaqhele ukuthetha ngayo size sisebenzise yona xa siguqulela.”
Bancedakala njani abo bafumana uncwadi sele luguqulelwe? Makhe senze umzekelo ube mnye: Kangangeminyaka eyi-40, uElena othetha isiTlapanec wayesiya rhoqo kwiintlanganiso zamaNgqina kaYehova. Ekubeni iintlanganiso zaziqhutywa ngeSpanish wayengeva. Uthi: “Ndandisazi nje ukuba ndifuna ukuya kwiintlanganiso.” Kodwa ke izinto zatshintsha emva kokuba efunde iBhayibhile esebenzisa enye incwadana yesiTlapanec, watsho wamthanda ngakumbi uThixo kangangokuba wabhaptizwa ngo-2013. UElena uthi: “Ndibulel’ uYehova ngokundivumela ndiyiqonde iBhayibhile.”